Madax Waynaha PSG Ee Nasser Al Khelaifi Oo Digniintii Ugu Waynayd U Diray Neymar Jr & Kylian Mbappe. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 16, 2019 at 17:28 Madax Waynaha PSG Ee Nasser Al Khelaifi Oo Digniintii Ugu Waynayd U Diray Neymar Jr & Kylian Mbappe.2019-06-16T20:28:00+01:00 CAYAARAHA
Madax waynaha kooxda PSG ee Nasser Al Khelaifi ayaa bixiiyay hanjabaadii ugu waynayd ee uu u diro ciyaartoyda magac wayn ee kooxdiisa ka tirsan, wuxuuna u hadlay qaab aan abid looga baran in uu ciyaartoyda kooxdiisa uga hadlo.
Nasser Al Khelaifi ayaa waraysi uu siiyay majalada caanka ah ee France Football oo barri si buuxda loo daabici doono waxaa laga sii bixiyay hordhaca waraysigan oo ay qayb ka tahay digniinta uu u jeediyay xidigaha ugu magaca wayn kooxdiisa.
Hadalka madax wayne Nasser Al Khelaifi ayaa si toos ah ugu socda Neymar Jr iyo Kylian Mbappe oo ah labada xidig ee kooxdiisa ugu saamaynta badan kuwaas oo uu digniin lama filaan ah u diray.
Nasser Al Khelaifi ayaa ku dooday in aanu hadda wixii ka danbeeya u dul qaadan doonin dhaqamada ciyaartoyda magaca wayn ee kooxdiisa iyaa oo arintani ay sii hurin doonto mustaqbalkii shakigu ku jiray ee Mbappe iyo Neymar Jr.
Arinta ugu layaabka badan ee aan hore looga maqal madax waynaha PSG ee Nasser Al Khelaifi ayaa ah in alabaabka u furo ciyaartoy magac wayn kooxdiisa ku leh haddii uu fulin waayo waxa uu ka doonayo.
Hordhaca waraysiga barri lagu daabici doono France Football, ayuu madax wayne Nasser Al Khelaifi waxa uu ku yidhi: “Waxay ciyaartoydu doonayaan in ay sii amba qaadaan masuuliyadooda in xataa ka badan sidii hore, waxaa waajib ah in ay gabi haaanba ka duwanaato”.
Nasser Al Khelaifi oo fariin lama filaan ah bixinaya isla markaana digniin aan looga baran u diraya xidigaha kooxdiisa ugu magaca wayn ayaa yidhi: “Waxaa iyaga waajib ku ah in ay wax badan qabtaan, in ay shaqo badan qabtaan, iyagu halkan maad uma joogaan. Haddii ayna aragtidan ogolaan, albaabku wuu furan yahay!”.
Madax wayne Nasser Al Khelaifi oo soo bandhigaya in aanu sidii hore ugu dul qaadan doonin dhaqamada aan fiicnayn ee ciyaartoyda kooxdiiwa ugu waa wayn ayaa yidhi: “Anigu intaas in ka badan ma doonayo in aan ku haysto dhaqanka xidigaha sare”.
Hadalka Nasser Al Khelaifi ayaa noqonaya mid gabi ahaanba khilaafsan qaabkii uu ciyaartoyda kooxdiisa uga hadli jiray, waxayna si buuxda loo baahin doonaa waraysigan oo dhan barri insha Allah, waxayna sabab u noqon kartaa in Neymar Jr iyo Mbappe uu hadalkani saamayn ku yeelan karo.
Dhaqamada xun ee uu Nasser Al Khelaifi ka cadhaysan yahay waxaa ugu badan Neymar Jr kaas oo ganaaxyo kala duwan la kulmay dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay wuxuuna ku dooday in ayna ciyaartoydu kooxdiisa u sii joogi doonin maad balse shaqo adag laga doonayo haddii kale uu albaabku u furan yahay.
« Wasaaradda Haweenka dowladda Puntland oo xustay maalinta Carruurta Afrika
Foreign interests blamed in escalating row with Somalia »